ကင်ဂျုံအွန်း ဘက်ဒူးတောင်ပေါ် မြင်းဖြူကြီးစီးပြီး ထပ်တက်
ကင်ဂျုံအွန်း ဘက်ဒူးတောင်ပေါ် မြင်းဖြူကြီးစီးပြီး ထ...
5 ธ.ค. 2562 - 00:28 น.
ဇနီးနဲ့ စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေနဲ့ အတူ ဘက်ဒူးတောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့ ကင်ဂျုံအွန်း
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်း မြင်းဖြူကြီး စီးပြီး အထွတ်အမြတ် ဘက်ဒူးတောင်ပုံ ထပ်ပြီး တက်သွားတဲ့ပုံတွေ အစိုးရ မီဒီယာက ထပ်မံ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာ နှစ်လအတွင်း မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် သူ့နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ပုံကို တက်သွားတဲ့ ပုံတွေ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု တစ်ခေါက်မှာတော့ သူဟာ သူ့ဇနီးရယ် စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေရယ်နဲ့ အတူ တောင်ပေါ်ကို တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကင်ဂျုံအွန်း အထွတ်အမြတ်တောင်ပေါ်ကို မြင်းဖြူကြီးစီးပြီးတက်
ထရမ့်နဲ့တွေ့ဖို့ ကင်ဂျုံအွန်း ရထားစီးသွားမလား
အရင်တောင်တက်ခရီးတွေ အပြီးမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကြေညာတွေ ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကင်ဂျုံအွန်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချခင် ဘက်ဒူးတောင်ကို တက်လေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နယ်စပ်နားမှာ ရှိတဲ့ ဘက်ဒူးတောင်
မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကြီးတွေ ဆွေးနွေးမယ့် အစည်းအဝေး ဒီလ အကုန်ပိုင်းမှာ ရှိလာနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာတွေမှာ ကြေညာ အပြီးမှာ အခု တောင်တက်ခရီး ဓာတ်ပုံတွေ ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစည်းအဝေးဟာ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ အရေးကိစ္စတွေ အတွက် အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အစည်းအဝေးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာတွေဆိုတာကိုတော့ ဒီ့ထက် အသေးစိတ် ထုတ်ဖော် ကြေညာတာ မရှိပါဘူး။
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး အနေနဲ့ကတော့ ဒီနှစ်မကုန်ခင် နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေး သဘောတူညီချက်ယူဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို အမေရိကန်က ပြောထားတာပါ။
ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်တို့ဘက်က အရင် ဒီနှစ်မကုန်ခင် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဖျက်သိမ်းရေးတွေ ပိုကမ်းလှမ်းဖို့ ကင်ဂျုံအွန်းကလည်း ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် ဘာယူမလဲဆိုတာ အမေရိကန်တွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကတော့ အခု တောင်တက်ခရီးဟာ ပိုပြီး တင်းတင်းမာမာ ဆုံးဖြတ်လာမှာတွေအတွက် အချက်ပြတဲ့ ခရီးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချခင် ဘက်ဒူးတောင်ကို တက်လေ့ရှိတယ်လို့ဆို
ဘက်ဒူးတောင်ကို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတ နေရာတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ မွေးဖွားခဲ့ရာ နေရာ အဖြစ်လည်း ဂုဏ်ပြုထားရှိထားတာပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြန်အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားမယ်လို့ သူ့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်းမှာ အရိပ်အမြွက် ထုတ်ဖော် မပြောခင် သီတင်းပတ် အနည်းငယ် အလိုတုန်းကလည်း ဘက်ဒူးတောင်ထိပ်ပေါ်ကို ကင်ဂျုံအွန်း တက်ခဲ့ပါတယ်။
ဘက်ဒူးတောင်ဟာ သက်ရှိ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀၀၀ ကျော်က ပထမဆုံး ကိုရီးယားမင်းဆက် ဂျိုစောင်ခေတ်ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တန်ဂွန် ဘုရင်ရဲ့ မွေးဖွားရာ ဇာတိလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒီတောင်ဟာ ပြုံယမ်းမြို့တော်နဲ့ ကီလိုမီတာ ရာချီဝေးပါပြီး မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တရုတ်နယ်စပ် မှာရှိတာပါ။
อัลบั้มภาพ ကင်ဂျုံအွန်း ဘက်ဒူးတောင်ပေါ် မြင်းဖြူကြီးစီးပြီး ထပ်တက်